Maareeyayaasha Hantida Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Maareeyayaasha Hantida gudaha New York City
Maareeyayaasha Hantida gudaha New York
Maareeyayaasha Hantida gudaha Oklahoma City
Maareeyayaasha Hantida gudaha Oklahoma
Maareeyayaasha Hantida gudaha Katy
Maareeyayaasha Hantida gudaha Texas
Waxa daabacay Ivan Cardona
arag Maareeyayaasha Hantida la daabacay 9 months ago
Waxa daabacay energypmokc
Waxa daabacay Katy Property Management
arag Maareeyayaasha Hantida la daabacay 2 years ago
Maamulaha guryaha ama maareeyaha guryaha waa shaqsi ama shirkad lagu soo oogay ka shaqaynta hantida ma guurtada ah lacag ahaan, markii mulkiiluhu awood u leeyahay inuu shakhsi ahaan u xaadiro faahfaahintaas, ama uusan xiiseyneynin inuu sidaas sameeyo. Hantida ayaa lahaan karta cinwaan gaar ah ama waxaa lagu lahaan karaa qayb hoosaad, shirkad saamileed ayaa leh waxaana loo diiwaan gelin karaa guryaha, xafiiska ganacsiga iyo tafaariiqda ama isticmaalka warshadaha. Waajibaadka caadiga ah ee laga filayo maamulaha guryaha waxaa ka mid ah helida / ka saarida iyo guud ahaanba la macaamilka kireystayaasha iyo iskuxirka rabitaanka milkiilaha. Qabanqaabooyinka noocan oo kale ah waxay u baahan karaan maareeyaha guryaha inuu aruuriyo kirooyinka, oo bixiyo kharashyada lagama maarmaanka ah iyo canshuuraha, sameynta warbixinno xilli xilli ah mulkiilaha, ama milkiiluhu si fudud ayuu u wakiili karaa howlo gaar ah oo uu ula macaamilaa kuwa kale si toos ah. Maamulaha guryaha ayaa qabanqaabin kara adeegyo badan oo kala duwan, sida uu weydiisanayo milkiilaha guriga, lacag. Meesha guri (guri fasax ah, guri labaad) oo keliya marmar la degan yahay, maareeyaha guryuhu wuxuu diyaarin karaa korjoogteyn xagga amniga ah, fadhiga, kaydinta iyo dhoofinta badeecada, iyo qandaraas hoosaadyada kale ee maxalliga ah ee lagama maarmaanka u ah si ay uga dhigaan guriga mid raaxo leh markii milkiiluhu leeyahay. ku nool yahay (yutiilitida, nidaamyada shaqeynaya, sahayda iyo shaqaalaha gacanta ku haya, iwm). Maareynta guryaha waxay sidoo kale ku dari kartaa guryaha ganacsiga meesha maamulaha milkiiluhu ka shaqeyn karo ganacsiga, iyo sidoo kale maareynta hantida. Shuruucda qaarkood waxay u baahan karaan maamulaha guryaha in loo sharciyeeyo xirfadkan. Maamulaha guryaha ayaa leh masuuliyada koowaad mulkiilaha iyo masuuliyada labaadna wakaalada. Xiriirka milkiiluhu uu la leeyahay milkiilaha iyo kireystaha wuxuu muhiim u yahay sameynta waxyaabaha laga filayo labada dhinac heshiiska markii ay labada dhinac baadi doonaan oo ay filayaan xuquuq iyo faa'iidooyin gaar ah oo ka baxa.